Ahoana ny fomba hanafenana ny takelaka na lavaka ao amin'ny EMUI | Androidsis
Ahoana ny fomba hanafenana ny takelaka na lavaka ao amin'ny EMUI
Nandany fotoana be dia be ny mpanamboatra nanamboatra izay alehan'ny fakantsary an-tariby an'ny telefaona, manasongadina ny famolavolana sy ny lavaka fakan-tsary. Matetika mitazona ny ampahany amin'ny sisin'ny tontonana toerana manokana natokana haka sary tsara indrindra miaraka amin'ilay sensor fantatra amin'ny hoe selfie.
EMUI, sosona fanao amin'ny telefaona Huawei sy Honor, azo atao ny manafina ny takelaka na ny lavaka manala azy raha manelingelina anao amin'ny antony rehetra. Amin'ny tranga sasany dia masolavitra iray ihany no miseho, raha mampiasa telefaona toy ny Huawei P40 Pro dia hisy sensor roa ao.
Azonao atao ny mamorona frame nomerika eo an-tampony mba handrakofana ny notch, ny zavatra ataony dia manafina azy, fa ho miasa kosa izy raha mampavitrika ilay fakantsary. Amin'ny antsika dia manana azy io isika na dia eo aza ny fipetrahany amin'ny bay kely roa, fa mety matanjaka amin'ny tsihy mainty izy io.
EMUI amin'ny Huawei sy Honor dia manana asa maro, anisan'ireny ny an'ny ferana ny fotoana ampiasanao ny findainao, ampandehano ny maody fampisehoana foana, mihidy apps amin'ny teny miafina ary maro hafa. Ny famenoana ny lavaka ao amin'ny fakantsary voalohany misy ampahany mainty dia toy izao manaraka izao:
Midira amin'ny Fikirakira an-telefaona Huawei / Honor
tsindrio ao amin'ny safidy «Screen sy ny famirapiratan»
Amin'ny efijery sy famirapiratana tsindrio "setting efijery misimisy kokoa"
Jereo izao ny «Notch» ary kitiho eo aminy hahazoana ny safidiny
Ho hitanao izao ny safidy roa azo fidina, ny "Maody Default" izay hampiseho ny toerana misy ny loaka na ireo lavaka nolavahana na ilay hanafina ilay toerana.
Raha vantany vao ampodinao izy io, dia hasehony anao amin'io ampahany io, ny hateviny kely tsy dia lehibe loatra ateraka etsy ambony ary manarona ny faritra anaovanao sensor na fakantsary fakan-tsary. Eo amin'ny toerantsika dia mandrakotra roa ny totalin'ny maha Huawei P40 Pro azy ary hita eo ankavia havia.
Amin'ny fomba kanto dia toa tsara be, azonao atao ny manohy mampiasa fakan-tsary tsy tapaka amin'ny tsy fanalana azy, manarona azy fotsiny ho an'ny hatsarana sy manararaotra ilay faritra. Amin'ny tranga tsy dia matevina loatra ny tsipika, mampiseho ny fampandrenesana rehetra amin'ny fomba marina, raha toa ka mihoatra ny iray ny mandany mitovy dia ampy ny fampiasana ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ahoana ny fomba hanafenana ny takelaka na lavaka ao amin'ny EMUI
Ny fampiharana Andron'ny mpifankatia tsara indrindra ho an'ny Android
Moba Xtreme Racing dia fiverenana amin'ny lalao video an'ny angano Victor Ruiz an'ny Dynamic Software